Kooxaha xuquuqda aadanaha oo walaal ka muujiyay dilal ka dhacay Nicaragua - BBC News Somali
Kooxaha xuquuqda aadanaha oo walaal ka muujiyay dilal ka dhacay Nicaragua
24 Juunyo 2018
Image caption Mudaharaadyadaoo dib u billaawday marka ay wadahadalladu dhicisoobeen
Kooxaha xuquuqda aadanaha ee Nicaragua ayaa sheegay ugu yaraan afar qof oo uu ku jiro ilmo yar in la dilay markii xoogagga nabadgelyada ay rasaas ku fureen mudaaharaad dowlada loogasoo hor jeeday o ka dhacay magaalada caasiamda ah ee Managua.
Xarunta difaaca xuquuda aadanaha ee Nicaragwa ayaa sheegtay in cidamada booliska iyo boliska sida mialteriga u tababaran iyo dad iskood isku abaabulay oo dowlada taageersan in ay weerar ku qaadaan habeenkii arday mudaahaard ka dhigayey jaamacada .
Baxadda uu leeyahay khalalaasahaan iyo mowjadaha dilalka ee ka dhacaya Nicaragua ayaa ah kuwa aad u warwar badan.
Goob joogayaal iyo ururada xuquuda aadanaha u dooda ayaa sheegaya in booliska, ciidamada amniga iyo maleshiyada hubeeysan ay sameysteen ururo aan sharciga waafaqsanayn.
Ciidamadan isu tagay ee daacadda u ah dowladda ayaa lagu soo eedeeyay in ay gesyteen mowjadahaan dilalka ee dhowaan ka dhacay dalka kuwaasi oo lagu dilay 4 qof oo uu ka mid yahay canug yar.
Booliska ka hortaga rabshada ayaa rasaas ku furay dibedbaxayaal ka soo horjeeda dowladda.
Maalmihii ugu dambeeyay kaniisadda Catholic-gga ayaa isku dayaysay in ay soo dhexgasho arrintan, marka hore waxa ay dib usoo celineysa wadahadaladi dhicisoobay kadibna waxa ay safraysaa magaalada Masaya oo bartimaameed u ahayd ciidamada amniga iyo maleshiyada taabacsan dowaldda.
Khalalasahaan ayaa haatan socda in kabadan muddo laba bilood balse haatan waxa ay u muuqata in xaaladda ay soo roonaneyso.
Ilaa iyo inta madaxweyne Daniel Ortega uu ka ogolaanayo in waqti hore uu iscasilo ogoldana in doorashooyin cusub laga qabto dalka uma muuqato in dibedbaxayaasha ay banyan doonaan wadooyinka.
Si kastaba ha ahaate, waxa uu madaxweynaha sheegay in uusan xilka banayneyn ilaa iyo inta uu ka dhamaanayo muddo xileedkiisa oo ku eg 2021-ka